Ellicott's Parent Company Markel Corporation Manamboatra Fortune 500 List
Ellicott Parent Markel Corporation Mihetsika ao amin'ny lisitra Fortune 500
Jolay 15, 2017
Ellicott ray aman-dreny Markel Corporation dia mihetsika ao amin'ny lisitra Fortune 500
Ny klioba stock 1,000 $ dia nandray ny mpikambana iray hafa.
Amin'ny alàlan'ny Amazon.com sy Alphabet mandalo ny $1,000 marika, orinasa iray tsy dia fantatra fanta-daza Markel vao niampita ny tokonam-baravarana ihany koa. Namely be ny fotoana rehetra $1,000.06 vao manomboka amin'ny varotra Alatsinainy.
Mandritra ny taona dia mihoatra ny 11% ny tahiry Markel. Raha ny lisitra farany ny orinasa amerikana Fortune 500 lehibe indrindra, vao navoaka, dia nifindra avy tany #486 mankany #460 i Markel. Ny zava-bita lehibe dia vola mitentina $ 5.6 miliara ary ny fampiasana ny tsena hatramin'ny $ 13.6 miliara hatramin'ny volana martsa 31, 2017.
Ny orinasam-pifandraisana no mivarotra voalohany amin'ny fiantohana, ary fantatra amin'ny paikady fampiasam-bola maharitra nandritra ny fotoana izay nahatonga fampitahana tamin'ny an'i Berkshire Hathaway sy ny filohan'ny angano nataony, Warren Buffett. Miaraka amin'ny vidin'ny anjara X $ 258,530, Berkshire dia manana tahiry be indrindra amin'ny orinasa amerikanina ary iray amin'ireo dimy orinasa voatanisa any Etazonia izay mivarotra mihoatra ny marika $ 1,000.
Mahazo fidiram-bola voalohany amin'ny fiantohana fiantohana sy famatsiam-bola i Markel, fa nanomboka nitodika tany amin'ny konglomera mini amin'ny 2005 ihany koa rehefa namorona Markel Ventures hiasa orinasa any ivelan'ny indostrian'ny fiantohana. Raha manana lalamby sy fitaovana ary orinasa indostria goavana i Berkshire, miaraka amin'ireo orinasa mpino am-polony maro, ny tranon'i Markel dia ahitana mpamorona dredge, mpamorona trano ary orinasa vita amin'ny mofo.
Ny sasany amin'ireto mpampiasa vola sandoka izay manaraka ny fangalarana ara-bola an'i Berkshire - noho ny lazan'i Mr. Buffett ho iray amin'ireo mpanamory entana tsara indrindra eran'izao tontolo izao - koa manara-maso ny portfolio-n'ny Markel. Ny toerany lehibe dia ny Berkshire, Carmax, Walgreens Boots Alliance Inc. ary Walt Disney Co amin'ny faran'ny ampahefatra voalohany, araka ny fanolanana amina mpanara-maso ny filaminana.
Na eo aza ny tsenam-piantohana "mahery setra", i Markel dia nitatitra ny tahan'ny fitomboana dimy taona amin'ny lanjan'ny boky isaky ny ampahany amin'ny 11% tao anatin'ny tatitra faran'izay nataony indrindra isan-taona.
"Ny lambam-pandanjalanjan'i Markel dia mijanona ho isan'ny conservative indrindra amin'ny orinasa," hoy ny nanadihady momba ny RBC Capital Markets Mark Dwelle tao anatin'ny fanamarihana fikarohana April April 27 rehefa nanakatra ny vidiny sy ny tombantomban'ny vola 2017 izy. "Ny orinasa dia manana renivohitra be, ny dian-tongotra an-tongotra ary ny fifehezana fandaminana mba hanohizany ny fampiroboroboana ny lanjan'ny boky amin'ny haavo avo roa heny."